Daawo muuqaalka: Madaxtooyada Somaliya oo Beenisay inay amartay in ciidamada shisheeye ay dalka Soomaaliya isaga baxaan. |
Daawo muuqaalka: Madaxtooyada Somaliya oo Beenisay inay amartay in ciidamada shisheeye ay dalka Soomaaliya isaga baxaan.
Iyada oo ay maanta idaacadaha Muqdisho qaarkood baahiyeen warar sheegayay in madaxweynaha Soomaaliya uu amar ku bixiyay in ciidamada Ethiopia iyo Kenya ay dalka si dhaqsa ah uga baxaan ayaa waxa shir saxaafada ugu qabtay Qasriga madaxtooyada wasiiru dowlaha madaxtooyada oo ku sheegay war ben abuur ah.
Wasiiru dowlada madaxtooyada Faarax Cabdulqaadir ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin warka idaacaduhu baahiyeen ee sheegaya in madaxweynuhu uu bixiyay amarkaasi tibaaxaya in waqti kooban ciidamada Kenya iyo Ethiopia dalka uga baxaan.
Wasiirka ayaa xusay in Webset Warkan maanta la baahiyay laga soo xigtay uusan aheyn Webset ku hadla afka Dowlada warkaasna uu ahaa War been abuur ah ayna umada u sheegayaan in Warkaasi jirin ee Maanta Baahiyeen Qaar kamid ah Idaacadaha Muqdisho